Umakhi wephansi we-kingUP SPC - Isazi seZD Floor
Ikhaya>Umakhi wephansi we-kingUP SPC
Hlela: UDenny　2020-03-07
I-KingUP yinkampani ekhiqiza phansi ehlanganisa i-R & D, ukwakhiwa, ukukhiqizwa, ukuthengisa, ukufakwa kanye nensizakalo yezobuchwepheshe yesiteji se-SPC kanye nePVC floor. Inkampani inamathele kwi-tenet ye "ngekhwalithi kuqala, ubuqili njengesixhumanisi esiyisihluthulelo, ikhasimende kuqala", igqugquzela ifilosofi yebhizinisi "yokuhlola nokwenza izinto ezintsha, yokuhlukahlukana kanye ne-win-win", iphikelela ekunikezeni amakhasimende ngemikhiqizo ephezulu kakhulu yephansi, izinsizakalo zobuchwepheshe bobuchwepheshe, futhi izibophezele Umkhiqizi omuhle kakhulu emkhakheni we-SPC flooring ekhaya nakwamanye amazwe.
Sine-fektri engu-1, imigqa ephelele yokukhiqiza ephansi engu-9, engakhiqiza amamitha-skwele ayi-5000 nsuku zonke.Angaqedwa kungakapheli izinsuku eziyi-15 ukusuka ngokulethwa kuya ekulethweni. Iphansi linamazinga wokuhlola ikhwalithi eqinile ngaphambi kokushiya ifektri ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu Kuhle. Le fektri iphinde imeme ochwepheshe basekhaya nabangaphandle ngezikhathi ezithile ukuthi banikeze ngemiyalo yezobuchwepheshe kanye nokuqeqeshwa kokusebenza kwefektri nabasebenzi bobuchwepheshe. Imishini yokukhiqiza izophinda iguqule namapharamitha ahlukahlukene noma ibeke izingxenye zezinto ngesikhathi ukuze kufinyelelwe ikhwalithi ephezulu yemishini nekhwalithi yomkhiqizo. Sinamathisela ukubaluleka okukhulu ohlelweni lwekhwalithi.Izitezi zenkampani yethu zihambisana ne-ISO90000: 2000 ukuphathwa kwekhwalithi yohlelo kanye nohlelo lwe-ISO141001 lokulawulwa kwemvelo, futhi sithole isitifiketi seEC.
Futhi singakunikeza amasampula wamahhala wokuhlola kwakho, futhi ngaphambi kokukhiqizwa, sizokuthumela futhi ifomu lemininingwane yokukhiqiza yokuqinisekisa kwakho. Ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, isinyathelo ngasinye silawulwa ngokuqinile yithimba elilawula ikhwalithi ukunciphisa usayizi womkhiqizo Iphutha lokukhiqiza imikhiqizo eseqophelweni eliphezulu ekwanelisekeni kwakho
Ukuze uhlangabezane nezidingo zabathengi abahlukile, i-KingUP nayo iyaqhubeka nokwenza ubuchwepheshe kanye nezinto ezintsha phansi kwe-SPC. Njengamanje, izindawo ezisemqoka ezisetshenziswayo ze-SPC zisezindlini, amahhotela, izindawo zokudlela kanye nezinye izindawo. Ukuphendula izici zalezi zindawo ezisetshenziswayo nezidingo zamakhasimende, i-KINGUP isungule izindlela ezahlukahlukene zokusebenzela ezinjengokuthi "anti-smoke, anti-mwanzo, anti-smudge" ukufeza izidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. Izidingo zokusetshenziswa kwesimo. Ngaphezu kokuphumelela kokusebenza ngokomzimba, abakhiqizi be-KingUP bahlala baphishekela emisha ukuhlobisa phansi. Sithuthukise imikhiqizo ehlukahlukene ye-SPC ngemidwebo ehlukahlukene, amaphethini nemibala, kanye nezindlela ezahlukahlukene zokuhlangana, njengokuhlanganisa izimpande kwe-herringbone, ukuhlangana kwe-fishbone, njll.
Ngokombono womkhakha wonke ophansi, abakhiqizi be-KingUP bazibophezele ekuhlinzekeni abathengi ngezigaba ezahlukahlukene kakhulu nezinto zokwakha ezihlukile zaphansi. Endaweni yezentengiso, ukusetshenziswa kwezinhlobo ezahlukene zezinsimbi zomhlaba noma ukwakheka okuhlukile esigabeni esifanayo kuzoba ukugxila ocwaningweni lwenkampani yethu esizayo.
Esimweni semakethe lapho izinhlobo ezinkulu zomncintiswano zincintisana, abakhiqizi beKingUP bazohlala benakekela inhloso yabo yangempela kanye nokunikeza umthwalo wemfanelo kumakhasimende ngemikhiqizo emisha ephezulu enempilo yemvelo. Njengamanje, i-KingUP R & D Center nayo inikezelwe ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwe-SPC flooring. Ayigcini nje ngokuhlaziya imininingwane yokuthengisa enkulu ye-KINGUP kusuka ekubunjweni kombala, ukuze kufinyelelwe ukuguqulwa kwefilimu yombala ngombala othengiswa kakhulu, kepha futhi ngombono wokusebenza nokusebenza, iyaqhubeka nokuthuthuka. Imikhiqizo emisha ephansi ehola ukuthambekela kwemakethe ihlangabezana nezidingo zamaqembu abathengi ahlukene nezinkambu ezihlukile zokusebenzisa. Khetha i-KINGUP ukwenza impilo yakho ibe ntle ngokwengeziwe!
Umakhi wephansi we-kingUP SPC Okuqukethwe okuhlobene